တစ်နေရာတည်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အပ်နှင်းထိုက်သော
ပံ့ပိုးမှုခေါ်ပါ ၀၀၈၆- (၀) ၃၃၅-၅၉၁၃၆၇၈
၀၀၈၆- (၀) ၃၃၅-၅၉၁၃၆၂၆
Piston rod stuffing box ပါ
Cylinder liner နှင့်အအေးခံအင်္ကျီ
အချက်ပြကြက် & စတင်အဆို့ရှင်
Fuel pump & Fuel pump gear ဖြစ်သည်
Rotor Shaft ပြီးပါပြီ
Compressor & Inducer ဘီးနှင့် Blade
Nozzle ring နှင့် Cover ring
High pressure suction & Exhaust valve များဖြစ်သည်
compressor အကြောင်း၊ အောက်ပါပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ထောက်ပံ့ပေးသည့် refrigerant compressor၊ အထုပ်အမျိုးအစားယူနစ်ပိုအေးစေခြင်း၊ Air conditioning compressor & Refrigerant air dryer စသည်တို့မှစစ်မှန်သောအစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ compressor များသည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရထိုက်သောစာရင်းများဖြစ်သည်။ မရ။
SINO-OCEAN MARINE PISTION လက်စွပ်လက်စွပ်စာရင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းအရန်ငွေကိုမူလနည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်ထပ်တူပြုသည်။ MC, MC-C, ME-C, FLEX, RTA စီးရီးများအပါအ ၀ င်မော်ဒယ်အမျိုးအစားများအတွက်သင့်တော်သော DAROS, NPR, PP စသည့်မူရင်းဖုံးထားသောဝိတ်ကွင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည်။ S35MC S35MC-C S35M ...
Sino-Ocean Marine Separator စတော့စာရင်း
S/N Model SPECIFICATION QTY အရည်အသွေး 1 P615 (ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်) MAX SPEED (BOWL): 9307R SPEED MOTOR SHAFT: 3600R 3.7 KW 60HZ MAX ။ FEED ၏ DENSITY: 1100 KG/M3 MAX အချိန်အတိုင်းအတာ: 2332 KG/M3 ...
SINO-OCEAN MARINE HYDRAULIC EQUIPMENTS စတော့စာရင်း
Sinoocean marine တွင် HYDRAULIC PUMP UNIT နှင့် HYDRAULIC VALVE များစွာရှိသည်။ သီးခြားစာရင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်းပတ်စက်များ၏ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးသည်။ 、 HYDRAULIC PUMP UNIT နံပါတ် Device Name Maker Specification QTY ...
SINO-OCEAN MARINE Air Compressor UNITS စတော့ရှယ်ယာစာရင်း
MAIN AIR COMPRESSOR： No. MODEL NAME CAP ရောင်းရန်အောက်ပါထုတ်လုပ်သူများနှင့်မော်ဒယ်များအတွက်သင့်တော်သောစတော့ရှယ်ယာ marine air compressor PRESSURE POWER SPEED QUALITY QTY ။ 1 DONGHWA-TANABE H-63 Air compressor 90m3/h 30kg/cm2 19.5 KW 1800 RPM GENUINE အသစ် 1SET2DONGHWA-TANABE H-373 ...
SINO-OCEAN MARINE YANMAR EY18ALW N18 M200 NOZZLE နှင့် PISTON လက်စွပ်တို့သည်စတော့ခ်
ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာ YANMAR EY18ALW/N18/M200 nozzle, piston ring, plunger, bearing, bearing rod bolts စသည်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ 511003nozzle EY18ALW 146623-533514EY18ALW 146623-5300 ...
SINO-OCEAN MARINE GOVERNORS စတော့စာရင်း
21-07-29 တွင် admin မှ
S/N Model SER ။ နံပါတ်အပိုင်းအပိုင်း SPECIFICATION QTY 1 3161 12065946 8540-629 WOODWARD TYPE 3161 P/N 8540-629 S/N 12065946 123161 NA NA TYPE: 3161 မော်တာ: VDC: 24 RPM:24L20 13F3CS-A25G DE035 ...
SINO-OCEAN MARINE TURBOCHARGER STOCK စာရင်း
S/N Model SPECIFICATION QTY ။ S/N Model SPECIFICATION QTY 1 TCA88-21079 NSMAX ။ : 11.900L/MIN TMAX ။ : 500 ℃ NCMAX.:11.700L/MIN DATE: 12.05 1 SET GENUINE NEW2NR15/R အတွက် 4R22MD-C2SETS3NR15/R151 အတွက် 5L23/30H TYPE အတွက်: NR15/R151 W/NO.7023520 ...
၀ ယ်သူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Sino-ocean Marine သည် pump များစွာရှိသည်။ စစ်မှန်သောအရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်အတူစုပ်စက်သည်သင့်အတွက်ယုံကြည်ထိုက်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများတွင်စုပ်စက်တွင်ဒေါင်လိုက် centrifugal pump, horizontal centrifugal pump, horizontal gear pump horizontal horizontal piston pump, horizontal screw pu တို့ပါ ၀ င်သည်။
HYDROPHORE PUMP UNIT အကြောင်း၊ Sino-ocean marine သည်အောက်ပါပစ္စည်းများနှင့်အတန်းအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ဖြင့်ပစ္စည်းများကိုစောင်နှင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ TYPE Specification SET （1） SHC40A-1.0-2R TANK CAPACITY: 1.0M3/H DESIGN PRESSURE (MAX/MIN): 4.5/3.0KG/CM2 MANUFACTURE NO ...
SINO-OCEAN MARINE GENUINE အသစ်စမ်းသပ် TURBOCHARGER ပြီးပြည့်စုံသောအကြံပြုချက်
အောက်ပါပုံစံများအတွက်သင့်တော်သော GENUINE NEW INITIAL TURBOCHARGER ကိုပြည့်စုံစွာပေးနိုင်ရန် No Type Maker Q'ty LWH Flange OD မှတ်ချက်များ .။
SINO-OCEAN MARINE ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်ကြိတ်ချေကိရိယာများ
၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှ Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinery Co. , Ltd. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အဏ္ဏဝါပစ္စည်းနှင့်အပိုပစ္စည်းနယ်ပယ်၌အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံအတွက် (ကြိတ်အအေးခံအဆို့ရှင်ထိုင်ခုံနှင့်အအေးမပေးသောအဆို့ရှင်အပါအ ၀ င်) ကိုကြိတ်ချေနိုင်သည်။
လိပ်စာ အမှတ် ၇ Wenquanhu လမ်း၊ QETDZ၊ Qinhuangdao၊ Hebei ပြည်နယ်၊ တရုတ်
ခေါ်ဆိုမှု ၀၀၈၆- (၀) ၃၃၅-၅၉၁၃၆၂၆
Sino-Ocean Marine Air Conditioning Compre ...
၂၈၊၀၈၊၂၁ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၇
၁၄၊၀၈၊၂၁ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၇
Hot Products များ, Sitemap
အခွံမာ, ရဟတ်, လက်စွပ်,